के हट्ला त साँझको फुटपाथको व्यापार ? ६ देखि १० बजेसम्म नगर प्रहरी परिचालन
नाङ्लामा सामान बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने अब कसरी बाँच्छन् ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले साँझको समयमा समेत फुटपाथ अतिक्रमण गरेर ब्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
महानगरपालिकाले शहरको सभ्यता र सौन्दर्य बिग्रँदै गएको र पैदलयात्रुलाई फुटपाथ छाडेर सडकमा ओर्लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था आएको भन्दै फुटपाथ व्यापार विरुद्ध अभियान सुरु गरेको हो ।
महानगरपालिकामा दिउँसोकाे समयमा कडाइ गरेपनि साँझको समय हुने फुटपाथको व्यापार रोक्ने गरेको थिएन ।
प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘नगर कार्यपालिकाले यस विषयमा निर्णय गरिसकेकको छ । यात्रु हिँड्ने फुटपाथमा कुनै पनि समयमा व्यापार गर्न नदिने गरी कडाइ गर्दैछौं ।’
उनले थपे, ‘आवागमनमा असर पर्ने गरी फुटपाथ अतिक्रमण गर्नेलाई हुने कारवाही पनि अब कडा किसिमको हुन्छ ।’
अब सामान फिर्ता नदिने
अहिलेसम्म फुटपाथमा व्यापार गर्नेको समान जफत गरेपछि परिमाण अनुसार १ देखि ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएर छोडिँदै आएको छ । अब भने सामान फिर्ता नगरेर लिलामी नै गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कार्कीले भने, ‘न एक रुपैयाँ भाडा तिर्नु परेको छ । न बत्ती, पानीको बिल खर्च गर्नुपर्छ । न राज्यलाई एक रुपैयाँ कर तिर्नु परेको छ । फुटपाथ ब्यापारले यात्रुको आवागमन मात्रै बिथोल्यो ।’
उनले थपे, ‘अघिल्लो दिन किनेको समान कमसल पर्यो भने साट्न पनि उपभोक्ताले पाएनन् । ठगी बढ्यो । त्यसैले अब पूर्ण रुपमा नियन्त्रणको नीति लिएका हौं ।’
महानगरपालिकाले खुद्रा बजारका लागि तत्काल कुनै व्यवस्थापनको विकल्प दिन नसकिने बताएको छ ।
केही वर्षअघि खुलामञ्चमा लाग्ने बजारलाई सरकारले हटाएपछि फुटपाथको व्यापार मौलाउँदै गएको छ । शहरी निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमाझ फुटपाथ बजार लोकप्रिय छ ।
सस्तोमा समान पाइने भएकाले पनि फुटपाथमा समान किन्ने जमात ठूलो छ, काठमाडौंमा । तर, गैरकानुनी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको बजार भएकाले यसलाई बचाएर नराख्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको हो ।
कसरी बाँच्छन् नाङ्लामा सामान बेच्नेहरु ?
जनजीविकासँग जोडिएको सवाल भएकाले महानगरपालिकाले फुटपाथको व्यापार हटाउन धेरै गाह्रो छ । अहिले फुटपाथमा पसल राख्न दिएर महानगरका नगर प्रहरी र महानगरका कर्मचारीले हप्तावारी बुझ्ने गरेका छन् ।
२–५ सयमा सामान किनेर नाङ्लामा राखेर फुटपाथमा बेच्नेहरुले अब कसरी जिवीकोपार्जन गर्लान् ? यो ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।
महानगरपालिकाले हतारमा निर्णय गरेर हजारौँको गाँस खोसिदिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका फुटपाथे व्यपारीलाई अन्यत्र कतै सरकारको सहुलियतमा व्यवस्थापन गरि फुटपाथलाई हटाउनु पर्ने थियो ।